Zvinhu Zvishanu Zvinoita Iyo Yakakura Kicheni Faucet
musha / Blog / Zvinhu Zvishanu Zvinoita Iyo Yakakura Kicheni Faucet
2020 / 11 / 08 kupatsanuraBlog 1471 0
Kune ruzhinji, kicheni haisi chete nzvimbo yekubika. Muchokwadi, tinoshandisa makicheni edu kusunungura, kusanganisa, kufungisisa. Makicheni aripo akawedzera kurongedzwa sezviri kudiwa kuti utore maitiro akasiyana. Ivo parizvino vanosungira kwete chete izvo zvinhu zvatinoda zvekugadzira uye kuwacha zvakadaro mukuwedzera maTV, mimhanzi inotarisisa, masherufu, zvigadzirwa zvinogadziriswa uye zvimwe zvimwe. Iwo makicheni anoshamisa, sezvazvakaita zvinhu zvavakashongedzwa nazvo.
Chero zvazvingaitika, pane chinhu chimwe icho chinenge chinenge chega chega chekicheni chemberi chine. Iyo inogara irimo, yakanyarara uye isingazvikudzi. Isu semutemo tinorerutsa chokwadi chaicho. Nekudaro hapana chaicho chero chimwe chinhu chine chinokatyamadza pane zvakasarudzika zvekicheni yedu.
Pombi ine zvibereko yakadai se wowow pombi inoita kuti kicheni chiite sechisingadaviriki uye chishande zvakanaka. Isu tinoda kugara kwenguva refu mukicheni yakadaro uye nekudzoka zvakanyanya kazhinji. Kana zvekare, zvisingatarisirwi, apo pombi inoodza moyo, hatigone kukoshesa kicheni zvakanyanya.
Ndakaita zvekutsvagisa pamhepo, ndakatarisa mhando dzakakurumbira, ndikaverenga zviratidzwa uye kuongorora kwevatengi, ndikawana zvinhu zvinomwe zvinogadzira pombi inoshamisa.
Pombi inoshamisa yekicheni ine mucherechedzo
Chokwadi, ini handinzwisise kuti ndechipi chikonzero nei chero munhu angatofunga isina kuiswa mucherechedzo pombi senge sarudzo. Vanhu vamwe nevamwe vanofunga kuti vari kuchengetedza here? Ngazvive sezvazviri, izvo hazvisi zvechokwadi. Chokwadi ivo vari kuparadza zvakakura. Iwo asina kumakwa mapombi anoparadza munguva pfupi. Vanotyora, vanodonhedza, vanoburitsa, vanoshatisa mvura uye vanochengeta varidzi vavo vachigara nekushandisa zvakanaka.
Haisi iro chete zita ratiri kubhadhara. Iko kuvimbika, iko kufambira mberi kwakapfuura kwakaitwa, rutsigiro rwevatengi rwakagadzirirwa kubatsira pamukana wekuti titange tapinda muzvinhu, kuvimbisa kuti pamapombi mazhinji hupenyu hwese. Spare akati wandei madhora uye kurasikirwa zvese izvi. Zvese zvakagadzirirwa?
Iko kune kwakasarudzika kusarudzika kwema brand uye vagadziri vanoita akanakisa, ane hunyanzvi uye akavimbika mapombi. Ingosarudza imwe sekuratidzwa nekuravira kwako uye zvaunoda. Ingo rangarira kuti "Yakagadzirwa muChina" harisi zita rechiratidzo.
Bhegi rinoshamisa rekicheni rinoronga zvakanaka nechomukati mekicheni
Zvese zvinhu zvinofungidzirwa, iwe unogona kufunga kuti maonero aya angangoda kuuya akawanda ezasi mune rundown. Hakusiko here kubatsira uye kusazungunuka mhando yakakwira zvakanyanya zvido? Chokwadi, vakadaro. Ngazvive sezvazvingaite, kuve unoshanda uye kuvimbika parizvino kwakanyanya kwazvo kune mapombi kubva kune ese anoonekwa mabhenji. Saka kumisikidza kwawana chimwe chezvinhu zvakakosha kusarudza danho. Kuva nechokwadi nezvezvinhu zvakasiyana, isu tinogona ikozvino kushivirira kuona mabhegi ane ziso rakasununguka zvakanyanya uye nekupa kutarisisa kwakakosha kune iyo chitarisiko.
Iwo maumbirwo haaperi. Pakutarisa kwakanyanya, chero zvakadaro, makirasi mashanu anogona kuzivikanwa:
mubatanidzwa wepamusoro maviri
Iyo yekucheka pamucheto mechina chimiro chechikamu chikuru chinosanganisira zvakakomba kutenderera uye mhango kana fanera rakaumbwa maumbirwo. Zvisikwa zvinokurudzirwa zvivakwa zvinotora mushure mezvirimwa uye zvakasikwa zvinhu. Mabhomba mashoma kwazvo, ngazvive sezvazvingaite, inosimbisa yakadaro isina kusvibiswa. Nguva dzose tinosangana nekubatanidzwa kwevaviri.
Mabhodhi eRetro anoramba achingowanda uye anoshandiswa kwenguva dzekitchen makicheni nepo matsva akagadzirwa nemisanganiswa isingafanoonekwe yematsime, misungo uye mizhinji yehumwe hushingi hunhu uye frill. Iwo maviri acho anoda inoenderana dhizaini kicheni uye zvakanyanyisa kushoma pane ese anosanganisira kushandiswa kupfuura iwo ari akananga mhando.
Pombi inoshamisa yekicheni haina kuoma kuunza uye kushanda
Kugadzwa hakufanirwe kutora maminetsi gumi kune mumwe munhu ane hunyanzvi hwekuita DIY, achiparadza pombi yekare isina kubviswa. Chaizvoizvo, kuri kutora hoses kuburikidza nepakadzika musingi kana mudhivha, kutarisira pombi, kuisungirira kubva pasi nekukwirisa pairi (kana nzungu) nekubatanidza zvikamu zvemabhawa kumvura inodziya uye inotonhora yemvura. . Iko kunowanzo kuve pasina yekutamba nekugadzirisa, elastic gaskets uye zvinhu zvakaenzana sezvo masangano aripo zvino asina mvura sezvaanoratidzika kunge ari.
Mubato unoshandura tembiricha uye mhando yerukova zviri nyore uye zvechokwadi. Izvo zvinofungidzirwa kurongedza rwizi kwese kwese mukati medhi uye kunyangwe yapfuura.
Mumabhomba ane musoro unoparadzaniswa unoputika hose inotsvedza pasina chayedza. Izvo hazvitaure nemuviri wepombi mukati uye zvinobudirira zvinopfuura nenzira yakatangwa muspout. Musoro wekupwanya unosanganazve uine vimbiso, uye hakuzombove nekufarira kwavo kusununguka. Mimwe faucet modhi inotoshandisa magineti akasimba kubata musoro wekumusoro wakasimudzwa.
Dhonza-pasi mapombi anowanzo shandisa chitubu chinoita kuti vadzokerezve kumubati kana vadzingwa. Mune faucet yakanaka, musoro wekugezesa unodzoka wakadzokerazve kumubati usina kurongedzwa nemunhu.
Iko kutenderera kwakaringana zvakakwana kuti ugadzire spout munzvimbo chaiyo yaunoda kuti ive.
Pombi inoshamisa yekicheni haina kusunungurwa kwehupenyu hwese
Bhizinesi neanoshandura washers uye gaskets ine nzvimbo neakare. Mavharuvhu akafambira mberi. Denderedzwa rakaomarara, nguva nenguva uye rakachengetedzwa nematombo anokosha, rinoita kuti faucets dzezvinangwa nezvinangwa zvive zvakaoma kupera. Havaregedze zvese kuburikidza nehupenyu hwavo, uye mubato unoshandura tembiricha uye kuyerera zvine mutsindo.
Pombi inoshamisa yekicheni ine rusununguko iyo inobvumidza kunyangwe hari huru kwazvo nemidziyo zvinopinda pasi payo
Pane mukana wekuti pombi iri pasi, hazvireve kuti zvinotyisa. Zvinoenderana nekuwanda kwemasinki unogona kunge wakagadzirira kuisa hari huru kwazvo pasi payo nekuwacha. Iva sezvazvingaite, nekuda kwechimiro chakamanikidzwa chepombi, ungangoda kuibvisa munzira yako nguva nenguva. Kwete chibvumirano chakakomba, ini ndinobvumirana. Iva zvazvingaite, sezvo uripo parizvino pombi inoshamisa, zvingave zvinobatsira kuwana chinhu chikuru chekicheni chakazoshambidzwa pasi pompombi iyi, uye nekuyera kukwirira kwakaita runyoro rwefaucet kukubvumidza iwe mukana yekuvandudza mune chero chiitiko, kana iwe uchisuka izvo zvakakura zvinhu.
Chero zvazvingaitika, chenjera kuti usawedzeredza. Semumamiriro ese ezvinhu, zvine hungwaru mupi wezano ane mutsigo kuwedzera pano. Pane mukana wekuti iwe, semuenzaniso, uve neakakura saizi griddle uye zvinhu zvakasiyana siyana zvidiki zvidiki, kunhonga pombi yehukuru hwedhishi kunogona kunge kuri kuwedzera kusingade.
Pakapfuura :: Zvekuita Kana uchitenga Iyo Kicheni Faucet Zvadaro: Nei Yakakodzera Kicheni Faucet Inoita Musiyano
Maitiro ekutsiva mapombi ekicheni?
Nei Yakakodzera Kicheni Faucet Inoita Musiyano
Zvekuita Kana uchitenga Iyo Kicheni Faucet
2020 US Bathroom Trends Chirevo: Smart Zvimbuzi, Sensor Faucets, Uye Tsika Bat ...
Yakasarudzwa neNASA, Aya Matoileti matatu Ari Kuenda Kumwedzi!
Unoziva Iwe Kuti Ungashongedza Iyo Inonyanya Kuzivikanwa Sunken Bathroom Muna 2020?